Hiran State - News: Shir ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada reer Hiiraan oo lagu taageeray Hiiraan State
Shir ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada reer Hiiraan oo lagu taageeray Hiiraan State
Addis Ababa:(hiranstate.com)- Dalka Ethiopiya waxaa ku nool jaaliyada labaad ee ugu badan reer Hiiraanka ku nool wadamada East Africa. Shirweyne si heer sare ah oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada reer Hiiraan ee ku nool caasimada dalka Ethiopiya ee Addis Ababa ayaa waxaa ka soo qeyb galay dhalinyaro badan oo u badnaa ardey qaarkood wax ka bartaan gudaha wadanka Ethiopiya iyo kuwo halkaasi ku sugaya intii ay nabadi ka dhaceyso dalkoodii hooyo ee Somaliya.
Shirkani oo ka dhacay mid ka mid ah Hotelada dalkaasi Ethiopiya ayaa ahaa mid muhiimadiisa leh maadama ay jaaliyada reer Hiiraan siiba dhalinyarada ku muujinayeen taageeradooda ku aadan maamul goboleedka Hiiraan State oo ay yiraahdeen waa maamulkii ugu rajada badnaa ee reer Hiiraan soo mara tan iyo intii ay soo hana qaadeen.
Dhalinyarada ayaa hore u diiday iney marnaba taageeraan ururo mucaarad ku ahaa Hiiraan State oo dadka hogaaminaya ay wadankaasi ku sugnaayeen iyagoo cidkasta oo taageera weydiisata ugu jawaabayey iney taageersan yahiin dowlad goboleedka Hiiraan State ee uu hogaminayo Dr Mohamud Abdi Gaab.
Sidoo kale dhalinyaradani ayaa halkaasi ka soo jeediyey qudbado iskugu jiray dhiiragalin iyo guubaabo ay u jeedinayeen dhalinyarada kale ee ku nool qurbaha iyo kuwa dagaalka ka wada Hiiraan iyagoo ku dhiiragaliyey sidii ay u taageeri lahaayeen dowlad goboleedka Hiiraan State.
ma ahan shirkii ugu horeeyey ee ka dhacay dalkaasi Ethiopiya ee lagu taageerayo Hiiraan State, maalintii axada ayey aheyd markii waxgaradka reer Hiiraan ee ku nool Addis Ababa ay shir noocaani oo kale ah isagugu yimaadeen si ay iyaguna u muujiyaan taageerada ay u hayaan Hiiraan State.
Madaxweynaha Hiiraan State ayaa noqonaya hogaamiyahii ugu taageerada badnaa 22kii sano ee ina dhaaftay marka loo eego kuwii ka horeyey oo aan waligood helin taageero midani oo kale ah oo ka timaada shacab ku kala sugan
dunida dacaladeeda. dhalinyaradii shirkaasi ka soo qeyb gashay ayaa si buuxda salaan hawada umariyey hogaamiyahooda amaba madaxweyanaha Hiiraan State iyagoo ku guubaabiyey iney wax walbo diyaar ula yahiin Hiiraan Statene ka tashado amaba kalsoonida kala laabto dowlada aan ilkaha laheyn ee iyagu 4ta KM ka joogta Mogdisho oo ay Hiiraan ka abaabulaan wacyi galin iyo xoreyn intuba.
Gabo gabadii shirka ayaa lagu balamay in la badiyo shirarka iyo iska warqabka si loo xoojiyo nidaamka dowliga ah ee ka curtay Hiiraan, sidoo kale maalmaha inu soo aadan ayaa waxaa iyaguna shir noocaani oo kale ah abaabulaya duamrka reer Hiiraan oo iyagu sheegay iney sameysanayaan xaflad midaani la mid ah oo ay ku taageerayaan madaxweynaha Hiiraan State Dr Mohamud Abdi gaab oo ay u arkaan shaqsi geesi ah oo u istaagay dadka reer Hiiraan.
Intaasi kedib waxaa madasha shirka lagu soo dhaweeyey gudoomiyaha dhalinyarada reer hiiraan ee Yurub iyo waqooyiga America Cismaan Raage (Saney) oo isagu ahaa shaqsigii isku soo duba riday shirka kaalin muuqatana ku lahaa ayaa ugu danbeyn u mahadceliyey dhalinyarada reer Hiiraan ee ku nool dalkaasi Ethiopia isagoo ka balan qaaday inuu xoojin doono isku xirka guud ee dhalinta reer Hiiraan ee ku kala nool dunida dacaladeeda, isagoo kula dar daarmay iney sameystaan gudoomiye u qaabilsan qaarada Africa iyo Asia. gaba gabadii shirka ayaa sidoo kale lagu taageeray musharaxa madaxweynaha Somaliya Prof Warfaa oo ay dhalinta reer Hiiraan ee Ethiopia u rajeynayan inuu ku guuleysto doorashadaasi dhaceysa July.
· admin on March 29 2011 16:32:19 · 0 Comments · 2837 Reads ·
14,667,502 unique visits